तपाईंको सपनाको किचन डिजाइन गर्न सुझावहरू - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
सम्पादकको पिक 17 सक्छ, 2021 14 सक्छ, 2021 रोन वुल्फ ब्लग, सम्पादकको पिक
Pinterest बोर्डहरू मार्फत ब्राउज गर्नुहोस् र तपाईंको ध्यान खिच्ने पिनहरू बचत गर्नुहोस्।
तपाईंले ठूलो योजना सुरु गर्नु अघि, यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंलाई थाहा छ तपाईंसँग कति ठूलो ठाउँ छ र तपाईंको एक्स्पोजमा कति ठाउँ छ।
यदि तपाईं थप सिट स्थान चाहनुहुन्छ भने, वा तपाईंले कतै अर्को ठूलो उपकरण राख्न आवश्यक छ, एक यू आकारको लेआउट तपाईंको जाने विकल्प हुनेछ।
के तपाइँ प्रक्रियामा हुनुहुन्छ? तपाइँको पुरानो भान्छाको घर पुनर्निर्माण? हुनसक्छ तपाईं र तपाईंको परिवारको लागि पूर्ण रूपमा नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, र घरको भान्सा घर नै आवश्यक कोठा हुनेछ। जे भए पनि, सपनाको भान्छाको डिजाईन सजिलो हुँदैन। पैसा र समय बाहेक तपाईले धेरै अनुसन्धान गर्नुपर्दछ, धेरै रचनात्मकता, लगानी खर्च गर्नुपर्दछ र केही काम गर्नु पर्छ कि तपाईले सँधै सपना देख्नुहुन्छ। यदि तपाईं कहाँ सुरु गर्ने भनेर निश्चित हुनुहुन्न भने, हामीले केही सुझावहरू पाएका छौं जुन तपाईंलाई तपाईंको सपनाको भान्सा डिजाइन गर्न मद्दत गर्दछ।
उच्च-गुण उपकरणहरू प्रत्येक भान्छाको एक महत्त्वपूर्ण तत्व हो।
जताततै प्रेरणा खोज्नुहोस्
जबकि केही व्यक्तिहरूले उनीहरूको सपनाको भान्छामा दोस्रो पल्ट कल्पना गर्छन् कि उनीहरूले नयाँ डिजाइन गरिरहेको छ भनेर बुझेका छन्, अरूहरू अत्यन्तै निन्दनीय छन्, र एकल विचार पनि लिन सक्दैनन्, सम्पूर्ण किचन डिजाइनलाई छोडिदिनुहोस्। यदि तपाईं पछिल्ला व्यक्तिहरूमध्ये हुनुहुन्छ भने चिन्ता लिनु पर्दैन। आजकल, वेबसाइटहरू र अनलाइन भरखरै संग आन्तरिक डिजाइन विचारहरू, तपाईं शानदार किचन डिजाइनहरूको एक पूर्ण स्पेक्ट्रम पाउन सक्नुहुन्छ। Pinterest बाट आन्तरिक डिजाइन वेबसाइटहरू र म्यागजिनहरूमा, तपाइँ सबै गर्न को लागी सबै ठाउँमा ब्राउजि start सुरु गर्नु पर्छ। तपाईंले निश्चित रूपमा कम्तिमा एउटा डिजाईन फेला पार्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई मनपर्दछ र तपाईंको भविष्यको भान्छामा लागू गर्न सक्नुहुनेछ। Pinterest बोर्डहरू मार्फत ब्राउज गर्नुहोस् र तपाईंको ध्यान खिच्ने पिनहरू बचत गर्नुहोस्। एकचोटि तपाईंले काम सकिसकेपछि, कम्तिमा आकर्षक व्यक्तिहरू फिल्टर गर्नुहोस् र विकल्पहरूलाई मात्र दुई वा तीनमा नै संकुचित गर्नुहोस्। एक वा दुई दिन पछि, तपाईंको दिमाग खाली हुनेछ, र तपाईं आफ्नो भान्साकोठामा हेर्न चाहानुहुन्छको एक सही चित्र हुनेछ।
पहिले तपाईंको स्थान विचार गर्नुहोस्
तपाईंले आफ्नो मनपर्ने कुरा फेला पार्नुभएपछि, तपाईंको ठाउँको भान्साकोठा सम्झिने ठाउँ भयो। कोठाको आकार र आकारमा निर्भर गर्दै, तपाईं सायद तपाईंले कुनै अनौंठो किचन डिजाइन अनलाइन मनपराउन सक्नुहुन्न। त्यसकारण, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग सबै नापहरू छन्, आकलन गर्नुहोस् तपाईंको इलेक्ट्रिकल आउटलेटहरू र प्लम्बिंग कहाँ छन् ताकि तपाईंलाई प्रत्येक फर्नीचर र उपकरणको टुक्रा कुन ठाउँमा जान सक्दछ भनेर ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। त्यसोभए मात्र तपाइँले जान्नुहुनेछ कि तपाइँसँग प्रेममा खसेको लेआउट र डिजाईनले तपाइँको घरमा काम गर्दछ। धेरै सानो भान्छाकोठामा टापु र ब्रेकफास्ट बार हुन सक्षम हुँदैन, तर दुई मध्ये केवल एउटा, वा न त हो। त्यसोभए, तपाईंले ठुलो योजना सुरु गर्नु अघि, यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको थालनीमा तपाईंको कति ठाउँ छ।
एउटा सजावट छनौट गर्नुहोस्
शानदार किचन लेआउटको समुद्रमा, तपाईं मात्र एक वा धेरै बिभिन्न लेआउटहरूको लागि अप्ट इन गर्न सक्नुहुन्छ। के तपाई क्याबिनेटरीका लागि पर्याप्त ठाउँ चाहानुहुन्छ? यदि तपाईंसँग तीन छुट्टै भित्ताहरू छन् जसले सबै क्याबिनेट र खाना पकाउने उपकरणहरू समात्न सक्छ, तब यू-आकारको लेआउट तपाईंको लागि उपयुक्त छ किनकि यसले तपाईंलाई एक उत्तम कार्यात्मक खाना पकाउने क्षेत्र प्रस्ताव गर्दछ। जी आकारको लेआउटमा सबै क्याबिनेटरी र उपकरणहरूका लागि तीन पर्खालहरू पनि सामेल छन्, तर यू-आकारको विपरित, यसले आंशिक चौथो पर्खाल अर्थात एउटा प्रायद्वीप प्रस्तुत गर्दछ जुन उपकरणहरू वा क्याबिनेटहरूको अन्य भागहरू समात्दछ।
यदि तपाईं थप सिट स्थान चाहनुहुन्छ भने, वा तपाईंले कतै अर्को ठूलो उपकरण राख्न आवश्यक छ, एक यू आकारको लेआउट तपाईंको जाने विकल्प हुनेछ। एउटा सानो भान्छामा उनीहरूको लागि, L- आकारको सजावटले सबै कार्यक्षमता र प्रभावकारिता प्रदान गर्दछ। धेरै जसो एल आकारको लेआउट जस्तै, गल्ली किचन लेआउट निर्बाध रूपमा सानो भान्छामा फिट हुनेछ। दुई विपरीत भित्ताहरूमा आफ्नो क्याबिनेटहरू भएकोले तपाईंलाई सार्न र खाना पकाउन समय खर्च गर्न पर्याप्त ठाउँ सिर्जना गर्दछ। के तपाईंसँग क्याबिनेटरी, उपकरण र टापुमा फिट गर्नको लागि पर्याप्त ठाउँ छ? तपाईं स्वतन्त्र रूपमा टापु वरिपरि हिंड्न र द्वीप भर उपकरणहरू खोल्न र बन्द गर्न सक्नुहुन्छ भनेर? यदि हो भने, त्यसोभए तपाईंले निश्चित रूपमा एउटा टापुको लेआउटमा विचार गर्नुपर्छ जहाँ तपाईं स्टोभ, सिink्क र फ्रिजको दूरीमा रहेको आफ्नो भान्साको टापु केन्द्र गर्नुहुन्छ।
तपाईं टापु चाहानुहुन्छ, तर तपाईंसँग पर्याप्त ठाउँ छैन? एउटा प्रायद्वीप लेआउटले तपाईंलाई तपाईंको भान्साकोठालाई यस्तो तरीकाले परिमार्जन गर्न अनुमति दिन्छ कि थप सीट, भण्डारण ठाउँ, र काउन्टरटप सतह क्षेत्र प्रस्ताव गर्दछ, तर तपाईं बिना ठाउँ त्यागेर तपाईं छैन।
एक विशिष्ट रंग योजनाको लागि जानुहोस्
र्गहरूले कोठाको सम्पूर्ण vibe मा ठूलो प्रभाव पार्दछ। त्यसकारण तपाईंले आफ्नो किचन रंग योजना बुद्धिमानीपूर्वक छनौट गर्नुपर्दछ। यसले कोठाको पूरै मूड सेट गर्दछ र तपाईं भान्छामा कति समय खर्च गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ त्यसमा प्रभाव पार्छ। उज्यालो, उत्तम सधैं उत्तम नीति हुन्छ। त्यसोभए, यदि तपाईं आफ्नो भान्साकोठालाई आमन्त्रित बनाउन चाहानुहुन्छ भने, उज्यालो र हावामा रंग बग्नुहोस्। क्रेम, बेज, चूना हरियो, पहेंलो वा कुनै पनि पेस्टल टोन भित्ताहरूको लागि उत्कृष्ट विकल्प हुनेछ। भित्ताका रंगहरूसँग तपाईंको उपकरणहरू मिलाउनुहोस् र अन्तिम वाह प्रभाव सिर्जना गर्नुहोस्। प्रकाशमा प्रकाश जाँदा एक सफा र नेत्रहीन ठूलो ठाउँ सिर्जना गर्न सक्दछ। यदि तपाईं प्रकाश रuesहरूमा सन्तुलन चाहानुहुन्छ भने, तपाईं गाढा फ्लोर र क्याबिनेटहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। धातु र चाँदीका उपकरणहरू समग्र रंग योजनाको साथ पूर्ण रूपमा फिट हुनेछन्।
उच्च-गुण उपकरणहरू प्रत्येक भान्छाको एक महत्त्वपूर्ण तत्व हो। यदि तपाईंसँग धेरै छ ओभन मर्मत विगतमा कम-गुणवत्ता उत्पादनहरूको कारण, तपाईंलाई थाहा छ कति ठूलो असुविधा हुन सक्छ जब तपाईं मर्मत गर्दा समस्या समाधान नभएसम्म तपाईं खाना पकाउन सक्षम हुनुहुने छैन। त्यसकारण तपाईको भविष्यको ओभन, फ्रिज, डिशवॉशर, माइक्रोवेभ र अन्य सबै किचन उपकरणहरू बुद्धिमानीपूर्वक छनौट गर्नुहोस्। सोच्नुहोस् यदि तपाईंलाई वास्तवमै छ-बर्नर होब चाहिएको छ वा यदि तपाईं केवल चार बर्नरहरूको साथ जान सक्नुहुन्छ भने। यदि तपाईं डिशवाशरमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं बायाँ वा दायाँ-बायाँ विचार गर्नुहोस्, सि sकको कुन पक्षमा यसलाई राख्ने भनेर निर्णय गर्न। लामो वारेन्टी र उच्चतम समीक्षाको साथ उपकरणहरूको लागि जानुहोस्। अनलाइन अनुसन्धान गर्नुहोस् र निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं यस पलको प्रेरणामा किनमेल गर्नुहुन्न, तर गुणात्मक उत्पादनहरूमा लगानी गर्नुहोस् यसको मतलब केही अतिरिक्त भुक्तानी गर्नुपर्दछ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ पनि एक डिजाइन को लागी जाउनु हुन्छ जुन पूरै किचन वातावरणमा फिट हुनेछ।
टिकाऊ सामग्रीहरूको लागि अप्ट गर्नुहोस्
राम्रो देखी बाहेक, तपाईंको भान्छा पनि वर्षौंको लागि रहनु पर्छ। अन्तिम चीज तपाईंलाई चाहिने चीज भनेको क्र्याक काउन्टरटप वा दोषपूर्ण सिink्क हो जुन तपाईंले तपाईंको भान्साकोठा बनाएको तीन महिना पछि। ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, साबुन र मार्बल तपाईंको ठोस सतहहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्पहरू हुनेछन्, तिनीहरूलाई लगाउने भारहरूको सामना गर्न र सबै काट्ने, पछार्ने र स्क्रबिंगबाट फाल्ने बनाउने। यसको शीर्षमा, तिनीहरू नेत्रहीन मनपर्दो प्रभाव पनि प्रस्ताव गर्नेछन्। ग्रेनाइट, उदाहरण को लागी, एक तटस्थ र color प्यालेट सुविधा। त्यसैले यो कुनै पनि रंग योजनामा ​​निर्दोष फिट हुनेछ। तपाईं विभिन्न ढाँचाबाट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ र विस्तृत वा सायद म्युट हुन सक्नुहुन्छ। जब यो फर्शमा आउँदछ, निश्चित हुनुहोस् कि तपाइँ टिकाऊ सामग्रीहरू पनि छनौट गर्नुहोस्। फ्लोर टाईलहरू मर्मत गर्न सबैभन्दा सजिलो हुन्छ र अन्य सबै समाधानहरूको सबैभन्दा स्पिल-प्रतिरोधी हो। भान्साको लागि काठ नलगाउनुहोस् किनभने यो महँगो पर्न सक्छ तर भान्साको लागि कम उपयोगकर्ता-अनुकूल हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, एक डिशवॉशर खराबीको बारेमा सोच्नुहोस्। यदि पानी बाहिर बहन थाल्छ भने, तपाईं कडा काठ वा टुक्रा टुक्राको सट्टामा पोर्सिलेन वा सिरेमिक टाइल्सको साथ धेरै राम्रो हुनुहुनेछ।
पर्याप्त भण्डारणको लागि योजना बनाईएको चाल हो सही प्रोले कहिले पनि बेवास्ता गर्दैन।
भण्डारण समाधानहरू दिमागमा राख्नुहोस्
पर्याप्त भण्डारणको लागि योजना बनाईएको चाल हो सही प्रोले कहिले पनि बेवास्ता गर्दैन। त्यसो भए, जब तपाईं आफ्नो मा काम गर्न सुरू गर्नुहुन्छ भान्सा डिजाइन, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं भण्डारण समाधानको बारे बिर्सनुहुन्न। तपाईले अनलाइन किचनका लागि स्मार्ट भण्डारण समाधानहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ र निर्णय गर्नुहोस् कि कुन तपाईंको लागि उत्तम काम गर्दछ। वाल्क-इन प्यान्ट्रीहरू वा पुल-आउट शेल्फका साथ प्यान्ट्रीहरू पूर्ण ठाउँ सेभर्स हुन्। आलसी सुसन तपाईको कुनाको क्याबिनेटका लागि उपयुक्त छन् तपाइँ अधिकतम ठाउँ प्रयोग गर्न अनुमति दिनुहुन्छ। साथै, तिनीहरू बुढा-मित्रवत पनि छन्। तपाईंको क्याबिनेटमा भण्डारण थप्न आवश्यक छ? सुविधाजनक रूपमा प्रयोग योग्य भण्डारण स्थानको दोस्रो लेयर सिर्जना गर्न दुई-कहानी अलल्फहरू प्रयोग गर्नुहोस्। यदि तपाईंलाई क्याबिनेट बीचको सानो साँघुरो ठाउँ के गर्ने भनेर थाहा छैन भने, एक पातलो मसला मसलाको र्याकले सबै मसलाको बोतलहरू र उत्पादनहरूका लागि पर्याप्त ठाउँ प्रदान गर्दछ जुन तपाईंको क्याबिनेटरीको विशाल स्थानमा गलत ठाउँमा राख्दछ।
गुणवत्ताको प्रकाश स्थापना गर्नुहोस्
लाइट फिक्स्चरले कुनै पनि डिजाइन बनाउन वा भ break्ग गर्न सक्दछ। त्यसकारण तपाईंले झाँडा, बत्तीहरू वा भित्ता बत्तीहरू खोज्दा बुद्धिमानीसाथ छनौट गर्नुपर्दछ। एक्स्पोज्ड तार पेंडन्ट बत्तीहरूदेखि गिलासले छोपेको प्रकाश, र औद्योगिक खुला बल्ब, विकल्पहरू तपाईंको भान्साको प्रकाशको लागि बरु विशाल छ। यदि तपाइँ विन्डोज मार्फत पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश प्राप्त गर्दै हुनुहुन्न भने, तब रसोईघरमा ठूलो झूमर राख्नुहोस्। निर्मित बत्तीहरू जुन तपाईं क्याबिनेटको तल्लोमा तपाईंको काउन्टरटॉपमा चम्काउनको लागि स्थान पाउनुहुन्छ सबैजनाको लागि स्मार्ट विकल्प हुनेछ जसलाई खाना प्रिपि duringको समयमा धेरै प्रकाशको आवश्यक पर्दछ। तपाईले छनौट गर्नुभएको फिक्स्चरको बाबजुद, यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले एक प्रकाशविद्युतीय कम्पनीलाई भाँडामा राख्नु भएको छ र सबै वायरिंग जाँच गर्नुहोस् यदि तपाईं विशेषज्ञ हुनुहुन्न भने।
सपनाको भान्छाको डिजाईन एक समय उपभोक्ता परियोजना हुन सक्छ। जे होस्, एक पटक तपाईले सक्नु भएपछि, तपाईले चाहानु भएको सबै चीज समाप्त गर्न तपाईले गरेको त्याग भन्दा सन्तुष्टि बढ्नेछ। त्यसोभए, जब तपाइँ नयाँ किचन निर्माण गर्ने समय भएको निर्णय गर्नुहुन्छ, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ हाम्रो बृहत गाइड अनुसरण गर्नुहुन्छ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको ठाँउ पर्याप्त छ कि तपाईंले कल्पना गर्नुभएको लेआउटको लागि पर्याप्त छ, तपाईंको रंग योजना बुद्धिमानीसाथ छनौट गर्नुहोस्, तपाईंलाई मनपर्ने पहिलो उपकरण खरीदमा हतार नगर्नुहोस्, र सँधै भान्साको लागि टिकाऊ सामग्री छनौट गर्नुहोस्। स्मार्ट स्टोरेज स्पेसको लागि योजना गर्नुहोस्, र निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ प्रकाश फिक्स्चरहरू छान्नुहुन्छ जुन दुबै पर्याप्त रोशनी र दृश्यात्मक मनपर्दो प्रभाव प्रदान गर्दछ।
सांप्रदायिक समाचार भान्सा भान्सा डिजाइन
रोन वुल्फ एक शौक डिजाइनर र एक DIY उत्साही छ, र सबै भन्दा माथि, दुई को एक धेरै धन्य बुबा। यस बाहेक, उनीसँग लेखनको प्रगाढ जोश छ।